Izitifiketi & Ukuhlonishwa
Isigaba esisodwa se-BS
I-DIN Rail Isigaba Esisodwa
AMI Smart Imitha
Imitha yokukhokha kusengaphambili
Imitha ye-C & I
Ingqalasizinda Yamamitha Athuthukile (i-AMI)
Isixazululo se-C & I
Izixazululo ze-N +
Ukuthuthukiswa Kwephrojekthi Nezimali
Ukuphathwa kwe-O & M
Isixazululo se-N + all-in-one
Isixazululo Sokuphathwa Kobuchule Bamandla
I-Smart Metering Engabizi Kakhulu eMiddle East
IPhrojekthi Ehlanganisiwe Yensiza Yezamandla yeZhangshi Highway
I-Smart Keypad base Meter Isigaba Esithathu esikhokhelwa ngaphambilini LY-SM350
Imitha eyi-Smart Three Phase Indirect Meter (CTVT Isetshenzisiwe) LY -...
Imitha eyi-Smart Three Phase Indirect Meter (CT Operated) LY-SM ...
I-DIN-Rail Smart Isigaba Esisodwa Esikhokhelwa Ngaphambilini Imitha LY-SM120
I-DCU LY-DC 12
I-Smart Keypad Single Phase Prepaid Meter LY-SM150
Imitha Yesigaba Esingashadile Ejwayelekile
Amamitha we-LY-BM11 ngamanani amamitha wesigaba esisodwa angambi eqolo, asebenza kumakhasimende asezindlini namaphrojekthi we-sub-metering. Zinembile futhi zigadwe kahle ngemisebenzi yokulwa nokuphazanyiswa, efanelekile ekuqoqelweni kwemali engenayo ebiza kancane nezixazululo zokuvikela.
Amamitha we-LY-BM11 aklanyelwe ngokuya ngesakhiwo esiguquguqukayo esinikeza izinketho eziningi ngokuya ngezidingo zemakethe nezamakhasimende.
Imitha Kagesi Ekhokhelwa Kusengaphambilini Ekhadi LY-SM150
Amamitha we-LY-SM150 akhokhelwa kusengaphambili amamitha kagesi we-AMI smart single phase, ne-BS edidiyele ikhiphedi / uhlobo lwe-Smart Card kanye / noma izinketho zohlobo lwekhiphedi lokuhlukanisa. Isici sabo esihlukile semodyuli yezokuxhumana ye-plug-and-play idala amathuba okushintshana nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zokuxhumana ezinentambo nezingenantambo, ezilungele amaklayenti we-C & I osayizi wokuhlala namancane.
Amamitha ochungechunge esikhokhelwa we-LY-SM150 anembile ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo kanye nemingcele yenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, okwenza kube lula ekuqoqweni kwemali engenayo kanye nezixazululo zokuvikela. Aklanyelwe ngokususelwa ku-20-bit Token ngokuya ngemininingwane ye-STS noma ye-CTS, ehambisana ngokuphelele ne-DLMS / COSEM, amazinga we-IDIS futhi aqinisekiswe ngezitifiketi ze-DLMS, MID, IDIS, STS, SABS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwawo endaweni yesikhulumi se-AMI
Imitha eyi-C & I CT / CTPT Smart
I-C & I CT / PTCT Izigaba ezintathu ze-CT / PTCT Ixhunywe yi-Smart Energy Meter iyi-Smart Meter esezingeni eliphakeme kakhulu yokukala isigaba se-AC esisebenzayo / esisebenzayo ngamandla anama-50 / 60Hz. Inemisebenzi ehlukahlukene eyinkimbinkimbi yokuthola ukukala kwe-Smart & Management of energy, enezici zokunemba okuphezulu, ukuzwela okuhle kakhulu, ukuthembeka okuhle, ububanzi bezilinganiso, ukusetshenziswa okuphansi, isakhiwo esiqinile nokubukeka okuhle, njll.
I-LINYANG SPLIT-TYPE SINGLE-PHASE DIN Rail Rail UKUKHALA IKHIPHAYITHI YOKUKHOKHELWA KWAMANDLA
I-Linyang Split-type Single-phase DIN rail mounting Keypad Prepayment Energy Meter iyimitha yamandla ejwayelekile ye-IEC esetshenziselwa ukukala isigaba esisodwa samandla asebenzayo e-AC ngemvamisa engu-50 / 60Hz nomsebenzi wekhokha kusengaphambili ngekhiphedi ne-TOKEN. Lapho abathengi bethanda ukuthenga ugesi, iVending point izobanikeza ama-20-bit TOKEN abethelwe ngemininingwane yokukhokha kagesi. Abathengi bafakela OKUKHUNIWE kumitha kusuka kukhiphedi, bese imitha isusa i-TOKEN bese ishaja imitha. Imali ekhokhwayo engu-TOKEN yakhiwe ngezinombolo ezingama-20. Iphrothokholi yokudluliswa kwedatha isikhalazo esinezinga le-STS.
Imitha Yesigaba Esithathu eyi-Smart LY-SM300
Amamitha we-LY-SM300 aphambili amamitha kagesi we-AMI smart amathathu, anezici ezihlukile zemodyuli yokuxhumana ye-plug-and-play, edala amathuba okushintshana nokusetshenziswa kokuxhumana okuthembekile kwentambo nokungenazintambo, kusebenza kumakhasimende we-C & I osayizi wokuhlala.
Amamitha we-LY-SM300 ahlinzeka ngezinsizakusebenza ngezinga eliphakeme lokunemba nokuthembeka ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo namapharamitha wenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazanyiswa, ebenza balungele ukuqoqwa kwemali kanye nezixazululo zokuvikela. Zenzelwe ukuhambisana ngokuphelele namazinga we-DLMS / COSEM IEC futhi ziqinisekiswe ngesitifiketi se-DLMS.
Imitha Yesigaba Esisodwa Esibucayi LY-SM160
Amamitha we-LY-SM160 angamamitha kagesi we-AMI smart single advanced level, ane-PLC edidiyelwe kanye / noma i-module yokuxhumana ye-plug-and-wireless, esebenza kumakhasimende we-C & I amancane.
Amamitha we-LY-SM160 ahlinzeka ngezinsizakusebenza ngezinga eliphakeme lokunemba nokwethembeka ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo namapharamitha wenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, okwenza kube ngamadivayisi afanele wezindleko eziphansi okuqoqwa kwemali kanye nezixazululo zokuvikela. Aklanyelwe ukuhambisana ngokuphelele namazinga we-DLMS / COSEM ne-IDIS futhi aqinisekiswe ngezitifiketi ze-DLMS nezama-MID ukuqinisekisa ukusebenzisana kwawo kungxenyekazi ye-AMI.
Imitha Engaqondile Engaqondile Yesigaba Esithathu (i-CT Isetshenzisiwe) LY-SM300CT
I-LY-SM300-CT ingamamitha amathathu kagesi we-AMI angaqondile ahlinzeka ngezinsiza ngokunemba okuphezulu kwesigaba esingu-0.5s / 0.2s nokwethenjelwa okuphezulu, okusebenza kumakhasimende ahlukahlukene e-C & I kanye namamitha esiteshi. Zibhalwe ngemisebenzi eqinile efaka isilinganiso sokulinganisa nokuqapha umthwalo kanye nemingcele yenethiwekhi ngaphezulu kwamandla wamandla amaningi kanye namabanga wamanje, ukuqapha kwekhwalithi yamandla athuthukisiwe kanye nokulinganisa kwe-THD njll, okunika amandla izinsiza nezimboni ezizimele kalula futhi ziqaphe amanethiwekhi abo wamandla kalula.
Idizayini ye-modular ye-LY-SM300-CT inikeza izinketho ezinhlobonhlobo zokuxhumana ezinentambo nezingenantambo. Ziqinisekiswe yi-MID, i-DLMS / i-COSEM ne-IDIS ukuqinisekisa ipulatifomu lokulinganisa elithembekile nelisebenzisanayo lohlelo lwe-AMI.
Imitha Engaqondile Engaqondile Yesigaba Esithathu (CTVT Isetshenzisiwe) LY-SM300-CTVT
I-LY-SM300- I-CTVT ingamamitha amathathu kagesi we-AMI angaqondile ahlinzeka ngezinsiza ngokunemba okuphezulu kwesigaba esingu-0.5s / 0.2s nokwethenjelwa okuphezulu, okusebenza kumakhasimende ahlukahlukene e-C & I kanye ne-metering substation. Zibhalwe ngemisebenzi eqinile efaka isilinganiso sokulinganisa nokuqapha umthwalo kanye nemingcele yenethiwekhi ngaphezulu kwamandla wamandla amaningi kanye namabanga wamanje, ukuqapha kwekhwalithi yamandla athuthukisiwe kanye nokulinganisa kwe-THD njll, okunika amandla izinsiza nezimboni ezizimele kalula futhi ziqaphe amanethiwekhi abo wamandla kalula.
Idizayini ye-modular ye-LY-SM300- CTVT inikeza izinketho ezinhlobonhlobo zokuxhumana ezinentambo nezingenantambo. Ziqinisekiswe yi-MID, i-DLMS / i-COSEM ne-IDIS ukuqinisekisa ipulatifomu lokulinganisa elithembekile nelisebenzisanayo lohlelo lwe-AMI.
Uchungechunge olukhokhelwa kuqala lwe-LY-SM350 luthuthukisiwe amamitha kagesi we-AMI smart amathathu akhokhelwa kusengaphambili, ane-BS edidiyele ikhiphedi / uhlobo lweKhadi le-Smart kanye / noma izinketho zohlobo lwekhiphedi lokuhlukanisa, zingalungiswa kumodi ekhokhelwa kuqala noma ekhokhelwa ngemuva. Isici sabo esihlukile semodyuli yezokuxhumana ye-plug-and-play idala amathuba okushintshana nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zokuxhumana ezinentambo nezingenantambo, ezilungele amaklayenti we-C & I osayizi wokuhlala namancane.
Amamitha ochungechunge esikhokhelwa we-LY-SM350 anembile ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo namapharamitha wenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, okwenza kube lula ekuqoqweni kwemali engenayo kanye nezixazululo zokuvikela. Aklanyelwe ngokususelwa kunkomba ye-20-bit Token based STS noma i-CTS, ehambisana ngokuphelele ne-DLMS / COSEM, amazinga we-IDIS futhi aqinisekiswe ngezitifiketi ze-DLMS, MID, IDIS, STS, kanye nezitifiketi ze-SABS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo endaweni yesikhulumi se-AMI.
Imitha Yesigaba Esithathu eyi-Smart LY-SM360
Amamitha we-LY-SM360 aphambili amamitha kagesi we-AMI smart amathathu, ane-PLC edidiyelwe kanye / noma i-module yokuxhumana engenazintambo, esebenza kumakhasimende we-C & I amancane.
Amamitha we-LY-SM360 ahlinzeka ngezinsizakusebenza ngezinga eliphakeme lokunemba nokwethembeka ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo namapharamitha wenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, ibenze babe ngamadivayisi afanele kakhulu abiza izindleko zokuqoqa izimali nezisombululo zokuvikela. Zenzelwe ukuhambisana ngokuphelele nezindinganiso ze-DLMS / COSEM ne-IDIS futhi ziqinisekiswe nge-DLMS, izitifiketi ze-MID ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo phezu kwepulatifomu ye-AMI.
Imitha Yesigaba Esisodwa Esibucayi LY-SM 150Postpaid
Amamitha we-LY-SM150 akhokhelwa angamamitha we-AMI smart single-phase metres, anesici esiyingqayizivele se-plug-and-play module yokuxhumana, okwenza amathuba okushintshana nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo ezinokwethenjelwa nezintambo zokuxhumana ezingenazintambo, ezilungele indawo yokuhlala nezincane C&I amaklayenti.
Amamitha we-LY-SM150 akhokhelwa enembile ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo namapharamitha wenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, okwenza kube lula ekuqoqweni kwemali engenayo kanye nezixazululo zokuvikela. Zenzelwe ukuhambisana ngokuphelele namazinga we-DLMS / COSEM ne-IDIS futhi aqinisekiswe ngezitifiketi ze-DLMS, MID, IDIS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo ngeplatifomu ye-AMI.
Imitha Yesigaba Esithathu Esinobuhlakani LY-SM 350Ekhokhelwe
Amamitha we-LY-SM350 akhokhelwa ngamamitha amathathu we-AMI athuthukile, anezici ezihlukile zemodyuli yokuxhumana ye-plug-and-play, edala amathuba okushintshana nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zokuxhumana ezinentambo nezingenantambo, ezilungele amaklayenti we-C & I osayizi wokuhlala namancane.
Amamitha wochungechunge we-LY-SM350 anembile ekulinganiseni nasekuqapheni umthwalo kanye nemingcele yenethiwekhi kanye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, okwenza kube lula ekuqoqweni kwemali engenayo kanye nezixazululo zokuvikela. Zenzelwe ukuhambisana ngokuphelele namazinga we-DLMS / COSEM ne-IDIS futhi aqinisekiswe ngezitifiketi ze-DLMS, MID, IDIS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo ngeplatifomu ye-AMI.
Ifektri: No. 666 Linyang Road, Qidong, Isifundazwe saseJiangsu 226299, China
Indlunkulu: 18F, ibhilidi 1, iZhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, China
Uma ufuna ukuthola imininingwane yakamuva, sicela ugcwalise ifomu elingezansi.
umucu (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"